कालो फंगस भनेको के हो? लक्षणहरू के के हुन्? – Koshidaily
मुख्य पृष्ठयौन/स्वास्थ्यकालो फंगस भनेको के हो? लक्षणहरू के के हुन्?
याे फंगस (ढुसी) संक्रमणको कारणले उत्पन्न हुने जटिलता हो। मानिसहरूले वातावरणमा फंगल बीजाणुहरूको सम्पर्कमा आएर म्युकरमाइकोसिस समात्छन्। यो छालामा चोटपटक, स्क्राच, जलन वा अन्य प्रकारका छालामा हुने आघातको माध्यमबाट प्रवेश गरेपछि छालामा विकास गर्न सक्दछ।
यो रोग कोभिड निको भइरहेका वा कोभिड-१९ बाट पुन: बिरामी भएकामा देखिएको छ। यसबाहेक, जो कोही मधुमेह रोगी हो र जसको प्रतिरक्षा प्रणाली राम्रोसँग काम गरिरहेको छैन उसले यसको विरूद्ध सावधान हुनु आवश्यक छ।
भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद्ले जारी गरेको सल्लाहका अनुसार कोभिड-१९ बिरामीहरूमा निम्न सर्तहरूले म्युकरमाइकोसिस संक्रमणको जोखिम बढाउँछन्:
• अनियन्त्रित मधुमेह
• स्टेरोइडको प्रयोगको कारण प्रतिरक्षा प्रणालीको कमजोर
• लामो आईसीयू/अस्पताल बसाई
• Co-morbidities / पोस्ट अंग प्रत्यारोपण / क्यान्सर
• भोरिकोनाजोल थेरापी (गम्भीर फंगल संक्रमणको उपचार गर्न प्रयोग गरिने)
यो कसरी कोभिड-१९ सँग सम्बन्धित छ?
यो रोग सूक्ष्मजीवहरूको समूह म्युकोरामाइट्स भनेर चिनिन्छ, जुन वातावरणमा प्राकृतिक रूपमा उपस्थित हुन्छन्, जुन प्राय: माटोमा र पात, कम्पोस्ट र कुहिने जैविक पदार्थहरूमा देखापर्दछ।
सामान्य अवस्थामा हाम्रो शरीरको प्रतिरक्षा प्रणालीले सफलतापूर्वक त्यस्ता फुँगल संक्रमणहरूसँग लड्दछ। हामी जान्दछौं कोभिड-१९ ले हाम्रो प्रतिरक्षा प्रणालीलाई असर गर्छ। यसबाहेक कोभिड-१९ बिरामीहरूको उपचारमा डेक्सामेथासोन जस्तै औषधिहरूको सेवन शामिल छ। जसले हाम्रो प्रतिरक्षा प्रणालीको प्रतिक्रियालाई दबाउँछ। यी कारकहरूको कारण, कोभिड-१९ बिरामीहरूलाई म्युकोरामाइट्स जस्ता जीवहरूकाे जोखिमको सामना गर्नुपर्छ।
थप रूपमा, कोभिड बिरामीहरू आईसीयूमा अक्सिजन थेरापीमा हुन्छन्, जहाँ ह्युमिडिफायर प्रयोग गरिएको हुन्छ, ओसको जोखिमको कारण पनि फुङल संक्रमणको खतरा हुन्छ।
तर यसको मतलब यो होइन कि प्रत्येक कोभिड बिरामीलाई म्युकरमाइकोसिसले संक्रमण हुनेछ। मधुमेह नभएको व्यक्तिहरूमा यो रोग असामान्य हो तर यदि तत्काल उपचार गरेन भने यो घातक हुन सक्छ। पुनःप्राप्ति को संभावना प्रारम्भिक निदान र उपचार मा निर्भर गर्दछ।
सामान्य लक्षणहरू के के हुन्?
म्युकरमाइकोसिस निधार, नाक, गालाको हड्डी र आँखा र दाँतको पछाडि रहेको छालाको संक्रमणको रूपमा देखिन थाल्छ। यो त्यसपछि आँखा, फोक्सोमा फैलिन्छ र दिमागमा पनि फैलिन्छ। यसले नाकमा कालो वा विकृति ल्याउँछ, धमिलो वा डबल दृष्टि, छाती दुख्ने, सास फेर्न गाह्रो र रगतको खोकी गराउँदछ।
थप लक्षणहरु यस प्रकार छन:
• कोभिड पछि टाउको दुख्न ताजा शुरुआत हुने
• नाक वा साइनस दुखाई
• मुखको माथिल्लो भागमा कालो धब्बा
• आँखामा दुखाइ र कहिलेकाहीं दृष्टि हराउने
• अनुहारको दुखाई हुने
यसको उपचार कसरी गरिन्छ?
• जबकी संक्रमण भर्खरै छालाको संक्रमणबाट सुरू हुन सक्दछ, यो शरीरको अन्य भागहरूमा फैलिन सक्छ। उपचारमा शल्य चिकित्साले सबै मृत र संक्रमित तन्तु हटाउनु समावेश छ। केही बिरामीहरूमा, यसले माथिल्लो बङ्गारा हराउछ वा कहिलेकाँही आँखा पनि गुम्न सक्छ।
• उपचारले ४-६ हप्ताको इन्टरभेन्सस एन्टि-फंगल थेरेपीको कोर्स पनि सामेल गर्न सक्दछ। यसले शरीरका विभिन्न अंगहरूलाई असर गर्ने भएकोले यसको उपचारको लागि सूक्ष्म जीवविज्ञानी, आन्तरिक चिकित्सा विशेषज्ञ, इन्टीभेसिस्ट न्यूरोलॉजिस्ट, ईएनटी विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ, दंत चिकित्सक, शल्यचिकित्सक र अन्यहरूको समूह चाहिन्छ।
• स्टेरोइड बाहेक, कोभिड-१९ औषधिहरू जस्तै Tocilizumob, Itolizumab को प्रयोगले प्रतिरक्षा प्रणालीलाई दबाउँछ। अनि जब यी औषधिहरू उचित रूपमा प्रयोग गर्दैनन्, यसले जोखिम बढाउँदछ, किनकि हाम्रो प्रतिरक्षा प्रणाली फंगल संक्रमणसँग लड्न असफल हुन्छ।
• मधुमेह नियन्त्रण भनेको सबैभन्दा पहिले रोकथाम विधिहरू मध्ये एक हो। यसैले, कोभिड-१९ बिरामीहरू जो मधुमेह रोगीहरूले अत्यन्त सावधानी अपनाउनु पर्छ।
• अक्सिजन थेरापीमा बिरामीहरूका लागि यो सुनिश्चित गर्नुपर्दछ कि ह्युमिडिफायरमा पानी सफा छ र नियमित रूपमा रिफिल हुन्छ। पानीको चुहावट नभएको कुरा सुनिश्चित गर्न ध्यान दिनुपर्दछ। बिरामीहरूले आफ्नो हात र शरीर सफा राखेर उचित स्वच्छता कायम गर्नुपर्दछ।
थप यसबाट बच्नका लागी मास्क , जुत्ता, लामो ट्राउजर, लामो स्लीभ शर्ट, ग्लोभ्स लगाउनुहोस्, दिनको तीन पटक तातो पानीको साथ गार्गलिंगको लागि प्रोविडेन आयोडिन प्रयोग गर्नुहोस् र बक्तिगत सरसफाईमा ध्यान दिन आवश्यक छ।
के अगरबत्तीको धुवाँ चुरोटको धुँवाभन्दा हानिकारक हुनसक्छ?